‘लाल्टिन’ र ‘आधा लभ’ पर्दामा, दर्शक कता ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
‘लाल्टिन’ र ‘आधा लभ’ पर्दामा, दर्शक कता ?
आज शुक्रवारबाट नेपाली चलचित्र बजारमा दुई चलचित्र सार्वजनिक भएका छन् । भानु प्रताप निर्मीत तथा देव कुमार श्रेष्ठ निर्देशित चलचित्र लाल्टिन र रिचा शर्मा प्रोडक्शनको अर्पण थापा निर्देशित चलचित्र आधा लभ एकै साथ रिलीज भएका हुन् । निर्माणको हिसाबले दुबै चलचित्र दर्शकहरुको लागि अपेक्षित छ । दर्शकले कुन चलचित्रलाई बढि माया देलान् भन्ने कुरा केही दिनमै निधो हुनेछ ।
रिचा शर्माले निर्माण गरेको चलचित्रले शहर भित्रको मान्छेहरुको मायाको अनुभाद बोलेको छ । जसमा फरक समूहमा रहेको मानीसहरुको मायाको चित्रण गरिएको छ । वास्तविक जीवनमा सबै मानीसले पुरा माया पाएको छ की छैन ? या कतिपय आधा लभमै सिमीत हो की ? भन्ने प्रश्न चलचित्रले गरेको छ । सानो सानो कथाहरुको संग्रह आधा लभलाई अर्पणले बाँध्न सफल भएको छ । चलचित्रले गत बुधवार प्रिमीयर पनि गरिएको थियो जसमा धेरै सेलिब्रिटीहरुले मिश्रीत प्रतिक्रिया दिएका थिए । चलचित्रमा रिचा शर्मा, अर्पण थापा, गौरव पहारी, मिथीला शर्मा, रोजिशा शाही लगायतका कलाकारहरुको मूखय अभिनय रहेको छ ।
यता दयाहाङ राई, प्रियंका कार्की, शिशिर भण्डारी, मेलिना मानन्धर, राज कटुवाल, निर्जन थापाको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र ‘लाल्टिन’ काठमाडौंमा सल्बलााईरहेको गुण्डागर्दीमा आधारित चलचित्र हो । निर्माण पक्षका अनुसार रातमा अपराधिक गतिविधी गर्नेहरुले लाल्टिन बाल्ने प्रयास गरिएको चलचित्र लाल्टिन हो । फरक फरक व्यक्तिहरु आफ्नो सपना पुरा गर्ने क्रममा के कारणले कसरी मोडिन्छ भन्ने कुरा चलचित्रले प्रस्तुत गरेको निर्देशन श्रेष्ठले बताएका छन् ।
लाल्टिन एक्शन चलचित्र हो भने आधा लभ लभस्टोरी आर्ट मुभि हो । दुबै चलचित्र अल नेपाल एकै साथ रिलीज भएको हो ।